प्रधानमन्त्री ओलीलाइ खुसीको खबर, जसपाले गर्यो यस्तो संकेत — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्री ओलीलाइ खुसीको खबर, जसपाले गर्यो यस्तो संकेत
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूह सरकारमा सहभागी हुने भएको हो । यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।
यस्तै नेकपा एमालेका युवा नेता एवं सांसद महेश बस्नेतले केपी ओलीका कारण भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनेको बताएका छन् । सोमबार आयोजित राष्ट्रिय युवासंघको कार्यक्रममा एमालेका युवा इञ्चार्ज बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
न्यायालय, सेना र विदेशी शक्ति एमालेको पक्षमा छैन भन्ने निरीह शब्दहरू विगतमा सुनिने गरेको बताउँदै सांसद बस्नेतले अहिले केपी ओलीका कारण गर्व गर्ने ठाउँमा आइपुगिएको बताएका छन् ।
बस्नेतले व्यक्ति गरेको विचारको अंश जस्ताको त्यस्तै:
हिजो माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूले चलाएको पार्टी र आज केपी ओलीले चलाएको पार्टी । हिजो यही पार्टीमा हो, कुनै लिङ्ग नभएको पार्टी । हाम्रा पार्टीका निर्णयहरु हामी सुन्थ्यौँ, एमालेले सबै अप्सन खुल्ला राखियो भन्ने निर्णय गथ्र्यो । एमाले कुनै अडान नभएको पार्टी । बाबुराम भट्टराईहरुले हामीलाई भन्ने गर्थे, नेकपा एमाले, न पोथी न भाले ! हास्य कलाकारहरुले हामीलाई भन्ने गर्थे, दूधको चिया खाउँ भन्यो भने काँग्रेस, कालो चिया खाऔं भन्यो भने माओवादी । दूधको भए पनि, कालो भए पनि ठीकै हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ एमाले । हामीलाई गीत गाउँथे काँग्रेसका साथीहरु– लालुपाते नुग्यो भुइँतिर कि लाउ उहीतिर, कि लाऊ माया मैतिर । तपाईहरु माओवादीसँग नजिक हो कि काँग्रेससँग नजिक हो ?
आज सेना केपी ओलीसँग प्रफुल्लित छ । प्रहरी केपी ओलीसँग प्रफुल्लित छ । आज न्यायालय केपी ओलीसँग सेटिङ्गमा छ भनेर विपक्षीहरुले आलोचना गर्ने गर्छन् । हिजो यही माधव नेपालहरु, यही झलनाथहरु चाहे त्यो कर्मचारी आन्दोलन भन्नोस्, चाहे त्यो दासढुंगा विरुद्धको आन्दोलन भन्नोस्, हामीले आन्दोलन गर्दा उहाँहरु आन्दोलन टुंग्याउने गर्नुहुन्थ्यो र हामीले प्रश्न गर्दा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि राजासँग ६० हजार भन्दा बढी सेना छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय शक्ति काँग्रेसको पक्षमा छ । अहिले पनि न्यायालय हाम्रो पक्षमा छैन । विदेशी शक्ति हामीसँग छैन । सेना प्रहरी हामीसँग छैन, त्यही भएर हामीले आन्दोलन टुंग्याउन बाध्य भयौं । यस्ता निरीह शब्दहरु हामी झलनाथ कमरेड र माधव कमरेडका मुखबाट हामीले सुन्थ्यौं ।
आज हामी गौरब गर्र्छौं, केपी ओलीको अदम्य साहस, त्यो अद्भुत क्षमता, जसका कारणले हामी देशभरि एमालेका कार्यकर्ता हुँदा छाती गौरबले फुल्ने गर्छ । नेकपा एमालेको यो पंक्तिले जुन ढंगले विकासमा काम गरिरहेको छ, समृद्धिमा काम गरिरहेको छ, आज स्थानीय तहमा मात्रै अरबौं पैसा गएको छ । अहिले वडा वडामा सडक बन्न थालेका छन् । पूर्वाधार बन्न थालेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र बन्न थालेका छन् । विद्यालय बन्न थालेका छन् । अस्पताल बन्न थालेका छन् । युवाहरुले रोजगारीका असंख्य अवसरहरु सिर्जना गर्न थालेका छन् । यस मानेमा हामी नेकपा एमाले भएका कारणले गौरब गर्न सक्ने ठाउँमा छौं ।